I-China eshibhile i-Sliding Window Ares80 ifektri nabaphakeli | Kinzon
Window Eshibhile Eyisisekelo Ares80
I-Sliding windows-Ares80 idume ngokufeza izidingo zokuphuma egumbini lokulala. Njengewindows elivula kalula, alinikezi ukubukeka nje kuphela, kepha linikeza nomoya omncane wokuphefumula. Lama windows awakhiwe ngobuhlakani ayavula ngaphandle kokusebenzisa noma iyiphi indawo engaphandle noma engaphakathi. Ngokuvumela ukuthi i-windows-Ares80 ye-sliding ikhiywe ekukhetheni izikhundla ezimbili ezivulekile, izikhiye zomoya opholile ezikhethekile nazo ziyatholakala.
Ingilazi eshiswe kabili
Isondo elihamba ngebhola
Ingilazi emibili yokufaka
Isikhathi esizinzile nesokugcina
Amathrekhi amabili noma amathathu
I-Sliding windows-Ares80 idume ngokufeza izidingo zokuphuma egumbini lokulala. Njengewindows elivula kalula, alinikezi ukubukeka nje kuphela, kepha linikeza nomoya omncane wokuphefumula. Lama windows awakhiwe ngobuhlakani ayavula ngaphandle kokusebenzisa noma iyiphi indawo engaphandle noma engaphakathi. Ngokuvumela ukuthi i-windows-Ares80 ye-sliding ikhiywe ekukhetheni izikhundla ezimbili ezivulekile, izikhiye zomoya opholile ezikhethekile nazo ziyatholakala. Abantu bangathola la mawindi ashelelayo-i-Ares80 yokuvumela ukukhanya nomoya ukungena ekhaya labo futhi nakho kufaka phakathi kwezangaphakathi zabo.
Kwisimo esivaliwe, i-Ares eqonde ngewindi le-aluminium enama-gaskets ajwayelekile ihlinzeka ukunciphisa umsindo ngokungaphezulu kwama-50 dB, okuwukuthi ngokuphumelelayo inciphise umsindo wasemgwaqweni .Ifasitela le-aluminium elishayayo lihlala lifudumele ebusika futhi livikela ebandayo.I-Research ikhombisa ukuthi ukugqekeza kumakhamera efulethini isakhiwo ngewindi le-Ares sliding aluminium singafinyelela isilinganiso esingu-15% samandla okonga.
Iwindows Finzone ye-aluminium eshayayo inelungelo lobunikazi futhi idlulisile umthwalo womoya, umthwalo wamaphoyinti kanye nokuhlolwa komthelela. Amaphrofayili we-aluminium kanye nezindlela zokuslayida nezokuvula zefinyule ye-aluminium ye-Finzone ehambayo zenziwe ngezinto zesimo sezulu. Iwindi le-Finyone lishelelisa iwindi linewaranti yemikhiqizo yeminyaka engu-10. Amapaneli efasiteleni le-aluminium elenzelayo le-Finzone ayenziwa ngengilazi yezokuphepha eyenziwe lukhuni. Iwindi le-Finzone elishelelayo le-aluminium livumelana nezidingo eziqinile ze-EC ezibekiwe / i-PSB e-Singapore / Gost eRussia.
Esedlule: I-Alloy Sliding Window Ares80-1
Olandelayo: I-Aluminium Up Down Sliding Window Ares83